Mayelana NATHI - Huizhou Kaiwansi Electronic Technology CO., LTD.
Huizhou kaiwansi Electronic Technology CO., LTDetholakala eHuizhou City, esifundazweni saseGuangdong. I-Limited ingumkhiqizi we-earphone ongenantambo osezingeni eliphezulu, egxila ku-R & D eyodwa ekhanda, ukukhiqiza nokumaketha eminyakeni engaphezu kwengu-9.
Imikhiqizo emikhulu ifaka phakathi i-neckband, i-headband ne-Tws earphone. Ifektri yethu inendawo engaphezu kwamamitha-skwele angama-3,000 enabasebenzi abangaphezu kuka-200 kanye nemigqa yokukhiqiza evuthiwe engu-4. Njengamanje, umthamo wokukhiqiza ungaphezu kwamayunithi angama-200,000 ngenyanga futhi imikhiqizo ithunyelwe emazweni angaphezu kwezi-150 nezifunda. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yethu iwine ukwazisa okukhulu ezimakethe ezahlukahlukene emhlabeni jikelele. Futhi sisekela ilogo yangokwezifiso kumkhiqizo.
WUnezixhobo zokuhlola ezisezingeni eliphakeme, izixhobo zokukhiqiza kanye nohlelo lokuphatha ukuqinisekisa imikhiqizo esezingeni eliphakeme. Zonke izinto zethu zihambisana ngqo ne-ISO9001: 2015 Quality Control Systems.
Selokhu yasungulwa ngo-2010, i-KAIWANSI ihlala inikezela ngemiklamo yemikhiqizo, ukulawula ikhwalithi kanye nensizakalo yamakhasimende, okuyimpendulo esheshayo futhi ifinyelela ukwaneliseka kwamakhasimende. Ngomzamo oqhubekayo, i-KAIWANSI yaziwa ngamakhasimende ngokukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphakeme. Futhi ngomnyango wobungcweti we-R & D, i-KAIWANSI ukuthuthukiswa okuqhubekayo kwekhwalithi ephezulu, imikhiqizo emisha ehlangabezana nokufunwa yimakethe. Amagugu ayisisekelo enkampani yethu ukuqamba izinto ezintsha, ubunye, ukusebenza ngokuzikhandla nokusebenza kanzima. Futhi wonke amalungu lapha angakhulisa amakhono abo ukuze bakhe umkhiqizo wenkampani.
Tukusebenzisana phakathi nezinkampani zokuhweba, sinikeza insizakalo ye-OEM ne-ODM kumikhiqizo eminingi ephezulu kule minyaka edlule. NgoJulayi, 2019, ngenhloso yokwandisa ububanzi bebhizinisi lase-INDIA NE-EURO futhi bazi kabanzi ngemakethe, uKAIWANSI usungule owakhe umnyango wezentengiso waphesheya kwezilwandle, okwamanje, uKAIWANSI uzenzele owakhe umkhiqizo i-FITHEM ... Impumelelo yethu ayiveli phezulu kuphela ukukhathazeka kwekhwalithi, kepha kusuka ekwethembeni nasekusekelweni kwamakhasimende. Futhi ngathola idumela elihle nedumela emakethe yamazwe omhlaba futhi ngathola nedumela elihle enqubeni yokubambisana Iziphakamiso zokwenza kahle umkhiqizo. Siyakwamukela ngobuqotho ukuthi uhlole ifektri futhi ufune ukubambisana kwesikhathi eside.